Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee wararka, qaybta 1: xulashada wararka, dejinta jadwalka | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ee wararka, qaybta 1: xulashada wararka, dejinta jadwalka
Daabacaadda wararka muhiimka ah ee dhaqaalaha iyo tirakoobka ayaa had iyo jeer sababa dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ku saabsan hantida maaliyadeed, calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ayaa joojiya shaqada, Amarada Jooji Khasaaraha waa la xiray iyo dhacdooyin kale oo aan fiicnayn. Waqtiyadan, xitaa ganacsatada khibrada leh ayaa laga yaabaa inay rabaan inay si buuxda u joojiyaan isticmaalka tilmaamayaasha farsamada oo ay ka ganacsadaan kaliya falanqaynta aasaasiga ah. Tani sax ma noqon doonto, fiiri sida loogu ganacsado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo aan khaladaad lahayn.
Ka ganacsiga warka waa mowduuc aad u tiro badan; aan u kala qaadno macluumaadka laba qaybood. Qaybta koowaad ee wararka ugu muhiimsan, waa maxay macluumaadka aad u baahan tahay inaad soo uruuriso ka hor inta aanad soo ururin liiska ugu dambeeya oo aad si habboon u habaynin kalandarka dhaqaalaha. Qaybta labaad waxay noqon doontaa xeelado ganacsi iyo talooyin.
Dhammaan istiraatiijiyadda wararka waxay ku saleysan yihiin tilmaamayaasha dhaqaala-dhaqaaleedka si joogto ah loo daabaco iyo tirakoobyada laga helo waddamada hoggaaminaya, taas oo saldhig u noqon doonta falanqaynta aasaasiga ah. Marka lagu daro Mareykanka iyo waddamada Eurozone, waxaa ka mid ah Boqortooyada Ingiriiska, Kanada, gobolka Baasifigga (Japan, Australia iyo New Zealand). Intaa waxaa sii dheer, Aasiya waa in la falanqeeyo, gaar ahaan Shiinaha, Hong Kong iyo Singapore.
Maxaa war ah in fiiro gaar ah loo yeesho
Jadwalka taariikhda maalin kasta waxaad ku arki kartaa warar badan iyo tirakoobyo heerar kala duwan leh, muhiimaddaada oo dhan kuma wada qeexi doonno. Xiiseyntu waxay si fudud uga heli doontaa qalabka saxda ah internetka; sharax kaliya dhacdooyinka muhiimka ah, si loogu isticmaalo istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah .
Waddan kasta marka hore wuxuu eegaa macluumaadka noocaas ah:
Waxsoosaarka Guud ee Gudaha (GDP) - Tilmaame dhaqameedka dhaqaalaha oo matalaya cabir lacageed oo ku saabsan qiimaha suuqa ee dhammaan badeecooyinka iyo adeegyada ugu dambeeya ee la soo saaray muddo cayiman (bil, rubuc, sanad). Kobaca GDP wuxuu xoojiyaa lacagta waddanka, hoos u dhaca ayaa daciifa;
Heerka shaqo la'aanta - waa tirada dadka shaqo la'aanta ah boqolley ahaan xoogga shaqaalaha muddo cayiman. Waxay kuxirantahay xaalada guud ee dhaqaalaha.
Heerka sicirka macaamiisha - waa mid ka mid ah noocyada indices indha sarcaadka loo sameeyay si loo cabbiro celceliska heerarka qiimaha badeecadaha iyo adeegyada (dambiisha macaamiisha) muddo cayiman ee dhaqaalaha. Kordhinta tusmada waxay muujineysaa horumar heerka nolosha iyo dhaqaalaha;
Sicir bararka - sicir bararka sii kordhaya wuxuu horseedaa daciifinta lacagta waddanka;
Heerka sicir-dhimista bangiga dhexe - mid ka mid ah xuduudaha ugu waaweyn ee xaaladda nidaamka maaliyadeed. Kordhinta qiimayaasha waxay keeneysaa xoojinta lacagta waddanka.
Marka lagu daro tilmaamayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah ee ganacsiga ugu fiican , waxaa jira warar goboleed iyo tirakoobyo sida DAX (tusmada ugu weyn Jarmalka) ama Canadian PMI Manufacturing PMI. Mar labaad, ujeeddada qoraalkani waa in la muujiyo hannaanka looga ganacsado wararka, oo aan loo sharraxin si faahfaahsan.
Shuruudaha xulashada wararka
Kadib markaan ururiyo liistada hordhaca ah ee dhacdooyinka dhaqaale ee midkasta oo raadinaya macluumaadka taariikhda qiimaha:
Iskucelcelis isbeddel ah 1-2kii sano ee la soo dhaafay;
Waqtiga uu bilaabmayo falcelinta suuqa ee laga soo xigtay xilliga la daabacay;
Dhaqdhaqaaqa suuqa 20-30 daqiiqo kadib daabacaadda, qaababka laambadda iyo xogta tilmaamayaasha farsamada;
Isku dar waqtiga ganacsiga iyo qaab nololeedka. Tusaale: haddii ganacsade ku nool yahay Gobollada Yurub, ikhtiyaarraduna ka furan yihiin wararka Aasiya, waa inaad habeenkii ganacsataa. Uma fiicna qof walba.
Tallaabada xigta waa in la doorto aalad muujineysa waqtiga daabacaadda ee wararka maaliyadeed ee waaweyn. Tusaale ahaan (macluumaadku ma ahan xayeysiin ama talo soo jeedin in la isticmaalo), kalandarka dhaqaalaha Investing.com oo leh interface fudud iyo ugu yaraan goobaha:
Isdiiwaangali goobta oo dooro «Qalabka» => «Kalandarka Dhaqaalaha» .
Xulo aaga waqtiga. Ogeysiis muhiim ah: aagga waxaa lagu xushay iyadoo lagu saleynayo waqtiga terminalka ganacsiga, oo ka duwanaan kara waqtiga maxalliga ah. Way kufiicantahay marka dilaalku ku shaqeeyo GMT, hadii kale, ku dar ama ka jaro tirada saacadaha la doonayo.
3. Sifee liiska wararka la soo bandhigay. Waxaad u baahan tahay inaad doorato waddanka, heerka muhiimadda ("xoogga") ama wararka loo isticmaali doono istaraatiijiyada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Marka la fiiriyo, wadamada dhaqaalahooda ay saameynta ugu badan ku leeyihiin suuqyada maaliyadeed horeyba waa loo xushay:
• Mareykanka (USD)
• Eurozone: Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga (EUR)
• Boqortooyada Ingiriiska (GBP)
• Jabbaan (JPY)
Waxaa lagugula talinayaa inaad joojiso wadamada intiisa kale si dhacdooyinka daciifka ahi aysan u carqaladeyn ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee looga ganacsado wararka. Aan u gudubno halbeegga ugu muhiimsan - awoodda wararka. Hoos u deg " Bogtada " bogga oo xulo xuduudaha soo socda:
« Muujinta waqtiga haray illaa lagu dhawaaqayo » - intee in le'eg ayaa ka hartay ka hor inta aan warka la daabicin, tusaale ahaan, «30 daqiiqo»;
«Muuji waqtiga kaliya» - goorta ay jiri doonaan warar sida ku xusan aaga waqtiga la doortay. Tani waxay ku habboon tahay newbie's, sameynta liistadooda ugu horreysa ee wararka iyo xulashada waqtiga ugu fiican ee ganacsiga.
«Qaybta» - marka loo eego, dhammaan qaybaha la cayimay waa la soo bandhigaa;
«Muhiimadda» - waxaa la xushay wararkii ugu adkaa, taas oo horseed u noqota qiime kacsan ama isbeddel isbeddel ah. Ganacsato khibrad leh ayaa wararka kaga ganacsan kara isbedel dhexdhexaad ah.
Ka dib markaad gujiso badhanka "Apply", waxaan helnaa jadwal dhaqaale oo leh qaab shaqsiyeed:
Ha iloobin diiwaangelinta hore ee goobta, haddii kale, isbeddelada lama keydin. Kaliya dhacdadii ugu xoogga badneyd ayaa loo xushay si dadka bilowga ah ay u baran karaan inay ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah uga iibsadaan wararka khaladaad la'aan. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka bilowdo hal waddan, sida Mareykanka ama Boqortooyada Midowday, oo kaliya sida khibrada iyo tirakoobka ay u ururiyaan liiska dhacdooyinka ganacsiga iyo heerka ay muhiimka yihiin. Wararka leh "dibi" (ahmiyada ugu hooseysa) lama isticmaalo.
Qaybta labaad sida loo isticmaalo falanqaynta aasaasiga ah ee istaraatiijiyada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo aan khaladaad ku samayn ganacsiga dhabta ah.